EU inoronga kupa chechitatu chebhajeti yayo kuvarimi uye kutsigira kusimudzira kwekumaruwa - Potato System Magazine
kuru Nhau dzenyika Europe
EU inoronga kupa chechitatu chebhajeti yayo kuvarimi uye kutsigira kusimudzira kwekumaruwa
в Europe, nhau
Musi waMay 26, vakuru veEU vakatanga kutaurirana nezvechirongwa chitsva cheCommon Agricultural Policy (CAP).
Ichabvumira kutungamira rubatsiro kune kusimudzira kwekumaruwa uye nharaunda. Huwandu hwakazara hweCAP rutsigiro huchave makumi matatu nemakumi masere neshanu euros. Iyi ingangoita chetatu chehuwandu hweEU bhajeti ye387-2021. Mitemo mitsva ichatanga kushanda kubva muna 2027. Pasi pechirongwa chitsva ichi, zviri kurongwa kudzikisa huwandu hwegreenhouse gasi inobuda kubva mune zvekurima ne2023 muzana na10. Kuti vaite izvi, panosvika 2050, varimi vachawedzera kubhadhara kwezvirongwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza kusvika pa2023, uye kubva muna 23 - 2025 muzana. Idzi ndidzo rubatsiro rwekuvandudza kurimwa kwehupenyu kana zvinowedzerwa zvekudya kuti uderedze methane emissions kubva kumombe.
Vatauri vacho vari kutaurawo nezve nzira yekutsigira varimi vadiki. Chimwe chezvikumbiro chaive chisarudzo chakasimba che "varimi vanoshanda". Rangarira kuti maererano neCAP, izvi zvinosanganisira vanyoreri vanoita zviitiko zvekurima chaizvo pazvikamu zvavo.
Pekka Pesonen, secretary general weboka reEuropean revarimi nemubatanidzwa wezvekurima Copa Cogeca, akayeuchidza kuti varimi vanoda mari "yakasvibirira". Mutauriri weEU akati kutaurirana pachirongwa chitsva kunofanira kupera svondo rino. Nekudaro, izvo zvirevo zvitsva zvakashoropodzwa nevanoona nezvezvakatipoteredza. Ivo vanotenda kuti mazhinji emabhizimusi, iko iko, achashandiswa pamhando dzekurima dzinokuvadza kune zvakasikwa. European Environmental Bureau yakati hurongwa hutsva hwezviremera hahune zvakanangwa zvekudzikisa mweya. Isu tinoonawo kuti nguva yakatarwa yekudzora mweya unokuvadza yakatemwa muchirongwa ichi yakanyanyisa.
Tags: European Unionrutsigiro rwevarimi
Iyo kambani "EastAgro" yatanga kuyedza kugadzirwa kwema prebiotic kubva kuJerusarema artichoke
Nei mbatatisi yakave chigadzirwa chinodhura kwazvo mugore
Plugin Gadza : Widget Tab Post inoda JNews - View Counter kuti iiswe
V Vesangano renyika dzese "ProStarch: Maitiro muMusika weAdvanced Grain Processing" akaitirwa kuMoscow
Nhau dzevhiki yekupera. Ongororo pfupi
Iyo bhizinesi chirongwa cheAGROVOLGA kuratidzwa chave kuzivikanwa
Mbatatisi inokwira mumutengo muKazakhstan